Miaro ny Vavolombelon’i Jehovah any Boligaria ny Fandresena Teny Amin’ny Fitsarana Tampony
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Danoà Espaniola Failandey Frantsay Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tenin’ny Tanana Amerikanina Tiorka Tseky Yorobà
Ny Fitsarana Tampony any Sofia, any Boligaria
Didim-pitsarana telo navoakan’ny Fitsarana Tampony any Boligaria no nanome rariny ny Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny Martsa 2019. Tena zava-dehibe ireo didim-pitsarana ireo satria hiaro ny zon’ny rahalahintsika hanompo an’i Jehovah.
Resaka fanasoketana nataon’ny mpanao gazety ny roa amin’ireo raharaha ireo. Namoaka lahatsoratra milaza lainga momba ny zavatra inoantsika ny gazety Vseki Den, tamin’ny 2012. Mitovitovy amin’izany koa ny nataon’ny tele SKAT TV. Zavatra diso momba ny fikambanantsika no navoakany, tamin’ny 2014. Samy tsy nanaiky ireo filazam-baovao ireo rehefa nasaina nilaza tamin’ny besinimaro hoe diso ny zavatra navoakany. Nandalo fitsarana maromaro ireo raharaha roa ireo ka tonga hatrany amin’ny Fitsarana Tampony. Nomelohin’ny Fitsarana Tampony ny SKAT TV, tamin’ny 18 Martsa 2019. Nomelohiny koa ny Vseki Den, tamin’ny 26 Martsa, satria nandainga sady nampiseho ny fankahalany olona, hoatran’ny SKAT TV ihany.
Momba ny fampijaliana nataon’ny antoko politika boligara VMRO tamin’ny rahalahintsika kosa ilay raharaha fahatelo. Nivory ny rahalahintsika tamin’ny 17 Aprily 2011 mba hahatsiaro ny nahafatesan’i Jesosy. Nisy olona 60 mahery setra notarihin’i Georgi Drakaliev, filoha ara-politikan’ny VMRO, namely an’ireo rahalahintsika, tamin’izay, ka maro no naratra. Nankeny amin’ny fitsarana ny rahalahintsika mba hitaky ny rariny. Tafakatra teny amin’ny Fitsarana Tampony ilay izy tatỳ aoriana. Nomelohin’io Fitsarana io Atoa Drakaliev, tamin’ny 20 Martsa 2019, ka tsy maintsy mandoa onitra amin’ireo rahalahintsika.
Faly isika noho ireo didim-pitsarana telo ireo. Azo ampiasaina izao ireo didim-pitsarana ireo mba hiarovana ny rahalahintsika, amin’izay izy ireo dia hanana “fiainana tony sy milamina hatrany, ao anatin’ny fahafoizan-tena ho an’Andriamanitra sy ny fahamendrehana tanteraka.”—1 Timoty 2:2.